Guardiola oo sharxay suurtagalnimada uu Kevin De Bruyne kaga qeyb qaadan karo kulanka Liverpool – Gool FM
Guardiola oo sharxay suurtagalnimada uu Kevin De Bruyne kaga qeyb qaadan karo kulanka Liverpool
(Manchester) 01 Okt 2018. Waxaa saacadihii lasoo dhaafay soo gaaray jamaahiirta kooxda Manchester City war aad u wanaasan kadib markii uu Kevin De Bruyne maanta dib ugu soo laabtay tababarka Sky Blues.
Kevin De Bruyne ayaa ka maqnaa safka kooxda Manchester City mudo dhan shan isbuuc, sababa la xiriira inuu dhaawac kasoo gaaray dhanka jilibka, xili uu ku gudi jiray tababarka kooxda Sky Blues.
Waxaa durbaba bilaawatay in su’aalo leyska weydiiyo suurtagalniga uu Kevin De Bruyne kaga qeyb gali karo kulanka adag ay horyaalka Premier League ku wada ciyaari doonaan kooxaha Liverpool iyo Manchester City, kaasoo ka dhici doono garoonka Anfield”.
Laakiin Pep Guardiola ayaa durbaba ka jawaab celiyay su’aalaha leyska weydiinayo in Kevin De Bruyne uu qeyb ka noqon karo kulanka Premier League ee Liverpool.
“Maanta wuxuu ahaa tababarkiisii ugu horeeyay ee kooxda, sidaasi darteed waan arki doonaa marka uu diyaar u yahay inuu ciyaaro, wuxuu ciyaari karaa laakiin waa inaan qiimeynaa xaaladiisa isbuucan”.
Mohamed Salah oo lagu arkay Hotel-ka Mourinho uu ka dagan yahay magaalada Manchester! (Muxuu ka doonay?)